Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka oo tababar u soo xiray howlwadeenno caafimaad “SAWIRRO – Radio Muqdisho
Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka oo tababar u soo xiray howlwadeenno caafimaad “SAWIRRO
Wasiirka ku-xigeenka Wasaaradda caafimaadka Cismaan Maxamed Cabdi oo tabarada la xiiriira xaaladaha deg dega ah ee hooyadda la soo deristi xiliga uurka ka hor iyo sidda loola tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka fircoooniga ayaa u soo xiray ilaa lixdan howlwadeenno caafimaad oo ka socdeen gobolada Koonfurta & Bartamaaha dalka.
Dr Salaad Xuseen Ducaale oo ka socday xafiiska UNFPA oo Wasaaradda caafimaadka ka caawisa daryeelka caafimaadka ayaa sheegay inay jireen wadamo sida Soomaaliya oo kale ay ugu jireen dhibaatooyinka haysta Hooyada iyo dhalaanka Soomaaliyeed, ayna uga gudbeen tabarada la xiriira caafimadka taranka.
Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi oo soo xiray tabarkaasi ayaa la xiriiray la tacamulada dhibaatoyinka caafimaad darro ee ka dhashay gudniinka fircooniga iyo mareynta xaalada deg edga ah ee ku yimada hooyada uurka leh dhalamada ka hor ayaa ka qayb galayaasha kula daradarmay in aqoonta ay tababarka ka faa’iideen ay kula laabtaan degaanadda ay ka yimadeen.
“Waxaa ogtihiin in ay na haysto dhibaato si weyn u samaysay hooyada dhalaanka Soomaaliya taasi oo ka dhigatay wadankeenna mida ugu sareeya geerida hooyadda uurka leh iyo dhallaanka Soomaaliyeed, marka tabarkaani waa midka aan ku yareyn lahayn qataraha soo food saarta hooyo uurka leh” ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka.
Tabaradda la xiriira daryeelka caafimaadka hooyadda iyo dhallaanka ayaa qayb ka ah qorshaha ay Wasaaraddu caafimaadka ay ku doonayso in ay wax kaga qabato dhibaatooyinka ka dhasha daryeel la’aanta caafimaad ee haysta hooyadda uurka leh.
Cabdi qeybdiid oo ku booriyay qeybaha bulshada ee Gaalkacyo inay la shaqeeyaan Maamulka cusub
Sanad guurada 1aad ee Radio Muqdisho codka ciidamada qalabka sida oo la xusay “SAWIRRO”
Sanad guurada 1aad ee Radio Muqdisho codka ciidamada qalabka sida oo la xusay "SAWIRRO"